Dabley dad badan markale ku laysay gobolka Xeebta Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareegcom: Dabley hubeysan ayaa xalay mar kale weeraro ka geystay gobolka Xeebta Kenya, waxaana la dilay ugu yaraan 13-qof.
Weerarada ayaa mid ka mid ah ka dhacay Jasiiradda Lamu oo ay horay uga dhaceen weeraro nuucaas, kuwaasoo lagu dilay dad ka badan 60 ruux.
Hay’adda bisha Cas ee dalka Kenya ayaa sheegay in afar qof oo ka mid ah dadkan ay ku dhinteen deegaanka ay ku badan yihiin Hindida ee Jasiiradda Lamu, halka ay sagaalka qof ee kalena ku dhinteen deegaanka Gambe.
Deegaanka Hindida ay ku badan tahay ee Jasiiradda Lamu ayaa waxay ku dhow dahay degmada a Mpeketoni oo bishii hore uu ka dhacay weerarro ay ku dhinteen 63-qof, kuwaasoo ay mas’uuliyaddooda sheegatay Al-shabaab.
Deegaanka Lamu ayaa waxaa bishii lasoo dhaafay ka dhaca weerar ay ku dhinteen 60-qof kuwaasoo ay sheegatay Al-shabaab, deegaankaas burbur xooggan uu kasoo gaaray dhismayaasha deegaanka iyo saldhigyada booliiska ee Mpeketoni.
Alshabaab ayaa horay ugu hanabay ineysan joojin doonin weerarada ay ka geysanayaan Kenya ilaa ay ciidamadeed kala baxdo Soomaaliya.
Siilaanyo oo magacaabay gobol Taleex xarrun u tahay